Njani ukwenza umboniso wesilayidi usebenzisa AVS ividiyo Umhleli - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Ukuba ufuna ukwenza umboniso wesilayidi ukusuka yedijithali, iifoto kunye zethu AVS ividiyo Umhleli, uyakwazi ukwenza umboniso wesilayidi kunye ezahlukeneyo ujikeleziso lothunyelo phakathi imifanekiso, izihloko zesibini okanye izimvo, ividiyo iziphumo, kwaye enesandi ingomaOkokuqala, ukungenisa ezifunekayo iifoto kunye namajelo eendaba iifayile (umzekelo, aziingceba ka-ividiyo okanye isixhobo sekhompyutha enesandi ingoma kusetyenziswa njengoko isiqalo umculo) kwaye endaweni kwabo ngomhla ummandla wexesha: storyboard. Cofa Storyboard iqhosha kwibar ummandla wexesha: Yesixhobo ukuswitsha ukuba Storyboard imboniselo, oko kubonisa ukulandelelana wongeza iifoto. Ukutshintsha ukulandelelana imifanekiso, ekunene nqakraza - omnye imifanekiso kwi storyboard kwaye usebenzise iinketho ukusuka Ekhohlo ukuya ekunene kwi-imenu yentsingiselo (ekunene nqakraza -).
Icwangcisa ixesha ngexesha apho photo iya kuboniswa kwi desktop.
Khetha babuza umfanekiso kwaye nqakraza Ixesha ukhetho kwi Storyboard-Toolbar. Faka babuza ixabiso kwi-window ukuba ivula kwaye nqakraza KULUNGILE. Ukuba ufuna lungelelanisa ukukhanya kwaye umahluko umfanekiso, khetha kwayo ukususela Storyboard yesixhobo, kwaye nqakraza Umbala iqhosha kwibar Storyboard yesixhobo ukuvula Umbala window. Ngolwazi oluthe vetshe, nceda jonga zethu kwi-intanethi uncedo.
Kwi-Storyboard window, cofa ujikeleziso lothunyelo qhosha kwi-umbindi kwekhusi.
Zonke ezikhoyo ujikeleziso lothunyelo iya kuboniswa kwi-Iifayile neziqhamo indawo. Baya ezisekiweyo yi-udidi kwi-ekhohlo yinxalenye lwenkqubo window. Ukongeza ezinye ethile ujikeleziso lothunyelo, kuqala khetha u-imifanekiso kwi Storyboard ukuba ufuna ukongeza transition phakathi, akunjalo - cofa transition kwi-Iifayile neziqhamo Indawo, kwaye yongeza kubo omnye ngexesha usebenzisa Yongeza kwaye Buyisela Transition khetho. Ukusebenzisa enye transition phakathi zonke iifoto, khetha Faka transition bonke kwimeko menu (ekunene nqakraza iqhosha le mouse). Isicelo ujikeleziso lothunyelo kwi-a random order, khetha Faka transition kwi-a random order khetho. Lungelelanisa transition ixesha ngokukhetha into efunwayo transition ukuba Storyboard kwaye nqakraza i Transition iqhosha kwibar Storyboard-toolbar.
Kwi-window ukuba ivula, faka efanelekileyo ixabiso kwi-Transition Ixesha mhlaba kwaye nqakraza KULUNGILE.
Kule iwindow, unga khangela kanjalo i-transition kuwe ekhethiweyo kwi-bonisa ifestile. Khetha isikhokelo umbhalo kwi-Iifayile neziqhamo Indawo. Tsala ekhethiweyo imodeli ukuba ixesha uhlenga-hlengiso umgca.
Cofa Umbhalo qhosha kwi-umbindi kwekhusi
Lokulungiswa ubude bexesha umbhalo, ekhohlo-nqakraza omnye kwimiphetho: wokubhaliweyo block kwaye uyitsale kwindawo babuza indawo xa ubambe phantsi iqhosha le mouse. Cofa kabini umbhalo block ukuvula Iimpahla window.
Cofa kabini i-default umbhalo kwi-bonisa indawo yefestile ukuba ivula kwaye ngenisa babuza okubhaliweyo.
Ungakhetha kwakhona isicelo ividiyo iziphumo yakho ntetho. Nceda, nceda jonga esi salathiso ukufunda njani ukwenza oku. Ukuba ufuna ukuthatha imifanekiso kwaye yongeza izimvo kubo, cofa Ilizwi qhosha kwi-umbindi kwekhusi. Qiniseka ukuba isandisi-sandi ifakiwe kwi-computer ke isandi ikhadi. Misela kokubhala parameters kwi-Mbali Ilizwi yolawulo, beka ummandla wexesha: isalathisi kwi-babuza indawo kwi-ummandla wexesha: lenjongo, kwaye nqakraza Qala Kokubhala (Qala kokubhala). Iqhosha uza kubuyela kwi"Yima kokubhala".
Cofa iqhosha ukumisa kokubhala nangaliphi na ixesha.
Ukongeza i-audio ingoma, cofa i-Library qhosha kwi-umbindi kwekhusi kwaye khetha isixhobo sekhompyutha Enesandi category e ngaphezulu umda.
Tsala ngaphambili aphesheya ingoma ukususela Iifayile neziqhamo indawo yesandi kuxutywa umgca Ngexesha umgca.
Ukuba ufuna ukwenza i-ntetho kwi-DVD okanye Iblue-ray ifomati, unako kanjalo yenza kwimenyu ye-cd. Cofa Imenyu qhosha kwi-umbindi kwekhusi. Qiniseka ukuba olujikelezayo fd imenu imiselwe.
Cofa kabini i-default isimbo kwi-Iifayile neziqhamo indawo", isicelo kuyo yakho ntetho.
Tsala i-umfanekiso okanye ividiyo ifayili evela Iifayile neziqhamo Indawo ukuba izithuba zokusebenza ezikhoyo ezantsi lwenkqubo window.
Khetha isihloko, tshintsha isiqalo umculo, kwaye khetha inani izahluko ngamnye iphepha eyiyo imihlaba kwi-izicwangciso Indawo. Ungakhetha kwakhona ngokwahlula le ntetho kwi thematic izahluko. Ukongeza Isahluko, cofa i-Izahluko iqhosha kwicala lasekhohlo lwenkqubo window, tsala i-ummandla wexesha: isalathisi ukuba banqwenela indawo, kwaye kwangoko cofa Ukongeza Kwi ummandla wexesha: yesixhobo.
ngesondo Dating ubhaliso engenayo Dating zephondo esisicwangciso-mibuzo Dating jikelele ehlabathini ividiyo ividiyo Dating kunye kubekho inkqubela ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko amagumbi-intanethi kuba free guys i-intanethi ukuya kuhlangana nawe private ividiyo Dating esisicwangciso-mibuzo roulette dibanisa ividiyo incoko esisicwangciso-mibuzo roulette ubhaliso girls